CAD ayaa ku wajahan GIS | GeoInformatics Maarso 2011 - Geofumadas
Maarso, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Bishaan tifaftirka cusub ee Geoinformatics ayaa yimid, oo leh mawduucyo aad u culus ee CAD, GIS, dareemo fog, xogta xogta; Noocyada aan mar dambe loo arki karin gooni u goynta. Mabda'a waxaan soo bandhigaa falanqeyn mid ka mid ah arrimaha i xiiseynaya, marka ugu dambeysa waxa laga soo koobay mawduucyo kale oo daabacan.
AutoDesk waxay leedahay qorshe dhab ah oo lagu galo SIG.
Qoraal weyn oo ku salaysan wareysiga Geoff Zeiss, khabiir ku takhasusay mawduucyada juquraafiga ah ee AutoDesk ee inoo sheega qorshaha shirkadu waxay keenaysaa arrintaan, iyada oo aragti muhiim u ah dadka isticmaala.
Taariikhda AutoDesk waa muddo dheer, inkasta oo ay ku qortay qodobka geoska tan iyo markii la bilaabay AutoCAD Map ee 1996, kaliya markii Oracle bilaabay SDO.
Kadibna waxaa la soo bandhigay AutoCAD Meel 3D, 2005, sanadka uu Google Earth u muuqdo.
Tan ugu fiican hadda waa qaybta GIS, oo si gooni gooni ah u shaqeysay, tan waxaa lagu daray qeybta weyn ee loo yaqaan AEC (Dhismaha, injineernimada iyo dhismaha). AutoDesk waxay dooneysaa inay ku sharraxdo qaabeynta BIM qaab dhammaystiran, taas oo ereyo kooban lagu soo koobay halbeeg aan ku joojineyno inaan aragno vector dabacsan oo aan aragno walxaha casriga ah ee adduunka dhabta ah, sida guryaha, derbiyada, baakadaha, jidadka, buundooyinka, oo leh astaamo ka baxsan ee 3D, oo ay ku jiraan kharashka iyo taariikhda macaamil ganacsi waqti ka dib sida qiimaynta, qiimaha beddelaadda, wax soo saarka, cusbooneysiinta, iwm.
Ma ahan in AutoDesk uusan horay ugu jirin mowduuca, waxa dhacaya ayaa ah in meelaynta alaabtu ay ku meerto (ka baxsan animation) agagaarka Naqshadeynta, injineernimada madaniga ah iyo dhismaha. Tan waxaa lagu arkaa aqoonsi ay leeyihiin Hal abuure, Revit iyo Civil 3D; Laakiin xalalkaasi waxay sii ahaanayaan ujeedooyin naqshadeyn ah, wax aad u yar ayaa loo qabtay dayactirka muddada-dheer ee kaabayaasha iyadoo la isku darayo xogta laga helayo qeybaha kala duwan ee alaabooyinka sida AutoDesk Utiliy Design iyo Topobase. Waa inaan ku sugnaano sheyga Mashruuca Galileo uu soo baxayo, kaas oo ah mid ka mid ah hal-abuurka ugu casrisan ee shaybaarka baaritaanka AutoDesk.
Waxaan sidoo kale u qaadanaynaa, in laga bilaabo versions of AutoCAD 2012 oo la bilaabi doono, waxaan arki karnaa isdhexgalka isdhexgalka oo aad uwanaagsan I-model ee Bentley Systems, oo leh magacyo kala duwan, lakiin labaduba waxay ku qeexayaan mowduuc ay ka mid yihiin injineerada, dhismayaasha, sahamiyeyaasha iyo warshadaha ayaa ka faa'iideysanaya qaabka geospatial.
In kasta oo qaybta aaladda ay aad u ballaadhan tahay, haddana BIM weli waa fikrad xoogaa astral ah, way nagu adag tahay inaan joojinno aragtida isbarbar dhigga oo ah derbi. Waxaa laga yaabaa sababta oo ah qiimeynta hay'adaha ka shaqeeya injineernimada madaniga ahi inay tahay wax aan caadi ahayn oo xamaasad leh, xitaa marka laga hadlayo dhismaha guryaha, laambad ka soo baxda guryaha wax qiimo ah uguma fadhin ujeeddooyin dayactir; Si kastaba ha noqotee, arrintu waa mid aad u xiiso badan marka laga hadlayo dhirta warshadaha halkaasoo waalka uu qiimahiisu noqon karo US $ 10,000 oo haddii dayactirkiisa aan la soo xaadirin, wuxuu sababi karaa malaayiin khasaare ah.
Marka haa, waxaan arki doonnaa BIM oo lagu dabaqay arrinta CAD-GIS, mowduuca naga madadaalin doonaana wuxuu noqon doonaa magaalooyin caqli badan (3D Cities), oo aan sidaa u soo jiidasho u lahayn dalalka soo koraya laakiin lagu horumariyo waddamo ay ka mid yihiin Dawlado. United, Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska, Kuweyt iyo Shiinaha, waxaan arki doonaa isbeddel aan laga soo kaban doonin sanadaha soo socda. Waxaan ka hadalnaa in ka badan inta aan aragno dhismayaal loo qaabeeyey saddex cabbir oo leh qaabab macquul ah iyo daruuro dhaafaya cirka (in xitaa Google ay sameyn karto); waxay ku saabsan tahay is dhexgalka naqshadeynta dhammaan arrimaha deegaanka ee magaalada oo aan si ballaaran loogu adeegsanin qaab dhammaystiran, sida halista masiibooyinka dabiiciga ah, isbeddelada isbeddelka cimilada, maaraynta kheyraadka dabiiciga ah.
Mawduucu waa go'an yahay, oo haddii AutoDesk halkaas tago, kuwa kale ayaa raacaya, haddii aan baaxad ahaan ama aragti ahaan, waxay ku sameyn doonaan si waafaqsan. Kiisaska sida dib u dhiska burburka Japan kadib tsunami waxay noqon kartaa tusaale wanaagsan, ka hor inta aan loo guurin degsiimooyin leh nidaam dalbasho dhuleed kaas oo walxaha la taaban karo ay yihiin doorsoomayaal khasab ah oo ah qaababka naqshadeynta iyo ilaalinta.
Mowduucyada kale ee daneynaya majaladda
Mawduucyada kale ee ku saabsan daabacaadda joornaalkan cilmiga ah ayaa weli soo jiidasho leh. Nasiib darro in nooca Dheecaanku aad u gaabis yahay, waxaa fiican inaad riixdo badhanka si aad ugu muujiso pdf, sug in yar inta ay ku shubaneyso, ka dibna midig-guji oo ku soo dejiso deegaanka.
Awoodda sawirrada goobaha juqraafiyeed. Maqaalkani waxaa lagu muujiyey sida loo isticmaalo, isticmaalka dhaqameed ee aan siinnay masawirada masaafada maalin kasta sida xudduudaha meesha ay ku yaalaan fogaanta.
WG-Edit, gvSIG kordhin cusub. Hal talaabo oo dheeri ah oo loogu talagalay gvSIG ee ku faafitaanka suuqa geospatial, taas oo markale joornaalka ku faafida noocaas ah ka tarjumeysa suurtagalnimada barnaamijkan bilaashka ah ee shakhsi ahaaneed. Waa wax qiiq ah, oo wax ka taraya kordhinta maareynta xogta kaabayaasha waddooyinka ee aagga Talyaaniga oo aan arki karno 6-da. safarada.
Riyooyin ah qabashada xogta dayax-gacmeedka. Mawduucan waxaa lagu daboolay maqaal kaas oo naloo sheegay in laga bilaabo 2014 aan awoodi doonno inaan helno xogta sare u qaadista adduunka oo sax ah, haddii wax waliba si wanaagsan ku socdaan satelite-ka Jarmalka ee TanDEM-X oo la bilaabay June 2010. Waxaa looga hadlayaa 2 mitir saxnaanta toosan ee qaraabada ah iyo ilaa 10 mitir oo saxnaan buuxda ah. Sawirka soo socdaa waa muunad Volcano Tunupa ah iyo aagga Salar Uyuni ee Bolivia.
Sida ay ERDAS u socoto. Waxaa jira maqaal aad u dhameystiran oo ku saabsan kartida barnaamijkan, labadaba oo ka socda ERDAS Imagine, nooca ugu caansan adduunka ee isticmaalayaasha GIS, iyo LPS, oo ah codsi loogu talagalay shirkadaha sameeya alaabada sawir-qaade, kordhinta loogu talagalay ArcGIS iyo Apollo qalab raaxo leh oo loogu talagalay aragtida xogta laga helo ilo kala duwan, adeegyada maxalliga ah, khariidadaha mareegaha iyo heerarka OGC. Xitaa maqaalka ayaa soo koobaya qaar ka mid ah isbeddelada shirkadda, oo ay ka mid yihiin horumarinteeda waxqabadyo badan si loo hagaajiyo waxqabadka kooxaha. GPUs.
Waxaan ku talin lahaa iyaga isha ku hay joornaalkaWaxaan kaliya soo koobay qaar ka mid ah kuwa soo jiitay fiirsigayga.
Post Previous" Hore Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012 | Siyaasadda Khaaska ah
Post Next CadExplorer, raadi oo ku bedel faylasha CAD sida GoogleNext »